Muxuu khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka u dhimi karaa Dowladnimada Soomaaliya? – Kalfadhi
January 20, 2019 Kalfadhi
Waxaan weli xal laga gaarin khilaafka u dhaxeeya labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo soo ifbaxay bilaawgii bishaan, markaas oo uu Guddoonka Aqalka Sare sheegay iney joojiyeen xiriirkii wadashaqeyneed ee ay la lahaayeen Golaha Shacabka.
Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo markii laysku daro ah hey’adda Sharci-dejinta dalka waxaa ka dhaxeeya xiriir wadashaqeyn oo toos ah, waxaana hadii ay wadashaqeyntooda istaagto hakad galaya dhamaan shaqooyinka qaranka, sida ay qabaan qubarada sharci-yaqaannada Soomaaliyeed.
Golaha Aqalka Sare ayaa ku doodaya in Golaha Shacabka ay isku kali yeeleyn xubinimada Baarlamaanada Caalamka, oo ay ahayd iney ka soo dhax muuqdaan Aqalka Sare iyo waxyaabo kale oo ka dhashay qaabka wadashaqeeneed ee Labada Gole, sida lagu sheegay qoraalkii ka soo baxay Guddoonka Aqalka Sare.
Waxaa jira walaac xoog leh oo laga qabo in arintaan ay saameyso guud ahaanba dhaq-dhaqaaqa dowladnimada. Sidoo kale, waxaa jira cabsi laga qabo in la wiiqo awoodda Aqalka Sare, hadii aan arrintaan si deg deg ah loo xalin.
Sanatar Axmed Macalim Cumar (Nadiir), oo ka tirsan Senatarada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa Kalfadhi u sheegay in khilaafkaasi uu saameyn karo hay’adaha kale ee dowladda, hadii uu sii jiro, balse wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in dhawaan la xalin doono.
“Waa labada hay’ad ee isugu dhaw hay’adaha dowladda oo dhan, waxaana ka dhaxeysa wadashaqeyn muhiim ah, oo aan marna u wanaagsaneen iney hakad gasho” ayuu Sanatar Nadiir ku yiri Kalfadhi. “Hadii aan la xalin khilaafkaan waxa uu saameyn karaa shaqooyinka kale ee hay’adaha dowladda, sida hey’adda fulinta” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Senator Axmed Macalim Cumar (Nadiir) waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in dhawaan la soo afjari doono khilaafka u dhaxeeya Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna sheegay iney ku jiraan masuuliyiin jecel dowladnimada, xalna ka gaari kara khilaafka.
“Rajo wanaagsan ayaan ka qabaa in dhawaan la soo afjaro; khilaaf ma wanaagsana; waxaa kaliya ee ka dhalan kara waa in xukuumaddu curyaanto, kadibna dalka uu dhaqaaqi waayo” ayuu Sanatarku hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay.
Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa qaba aragti ka duwan midda Sanatar Nadiir ee ku aadan khilaafka Labada Gole. Waxa uu sheegay in aysan jirin wax saameyn ah oo ay arintaan ku yeelan karto shaqada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Arintaan ma jirto wax saameyn ah oo ay ku yeelan karto shaqada Golaha Shacabka, balse waa laga yaabaa iney saameyso xukuumadda” ayuu yiri Xildhibaan Faarax. “Annaga waxaan qabannaa sharci ama xeer ka soo gudba xukuumadda, kadib markii aan go’aan ka gaarno ayuu u gudbaa Aqalka Sare, marka ma jirto saameyn nooga imaan karta” ayuu Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan ku yiri Kalfadhi.
Xildhibaan Faarax waxa uu carrabka ku adkeeyey in cidda kaliya ee uu go’aanka Aqalka Sare saameyn doonto ay tahay xukumadda iyo shacabka. “Annaga wixii naga soo gudba ayey qabtaan, haddii ay meel dhigtaana xukuumadda ayey curyaamiyeen iyo shacabka ee anaga waxba nooma dhimin, waayo waa naga soo gudbay” ayuu yiri Xildhibaan Faarax.
Barafasoor Maxamed Xasan Maxamed, oo bartay Culuumta Sharciga, sidoo kalane xog ogaal u ah khilaafka u dhaxeeya Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa u sheegay Kalfadhi in khilaafkan uusan saameyn yeelan karin markii loo eego sida ay wax ku socdaan. “Golaha odayaasha ama Aqalka Sare waa la wiiqay saameentooda, waxaana laga dhigay hay’ad aan jirin markii loo fiiriyo xaaladiihii ugu dambeeyay ee dalka” ayuu yiri Barafasoor Maxamed Xasan.
“Waa la maquuniyay odayaasha, Dowlad Goboleedyadii iyagaa cararaya, xeerarkii iyo sharciyadii markii uu soo ansaxiyo Golaha Shacabka iyaga cidna lama sugto, oo Madaxweynahaa toos loogu gudbiyaa, waana nasiib darro” ayuu yiri Maxamed Xasan Maxamed, oo bartay Culuumta Sharciga.
Maxamed waxa uu sheegay in waqti hore looga baahnaa Aqalka Sare iney dhaq-dhaqaaq sameeyaan, laakiin hadda markii ay arkeyn in la maquuniyay ayuu, sida uu hadalka u dhigay, sheegay inuu wado isku day uu ku sii jiri karo. “Waa sax dhamaan tabashadooda; xubno kuma lahan Xildhibaanada Caalamka iyo kuwa Gobolada iyo Baarlamaanada Ururada Islaamka. Waxbay damceen iney xeeriyaan, laakiin sidii ay rabeyn waa u noqon weysay, dulqaadkii ayaa ka dhamaaday” ayuu yiri Barafasoor Maxamed.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa Xarunta Golaha Shacabka ka sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo soo afjari lahaa tabashada Aqalka Sare, oo maalmo shaac-baxsaneyd. “Waxaan ka shaqeyn doonaa inta uu xiran yahay Kalfadhiga 4-aad sidii loo xalin lahaa tabashada Aqalka Sare” ayuu yiri Guddoomiye Mursal. “Waan ku kalsoonahay inaan xal ka gaari karno tabashadooda, waayo waa rag wadaniyiin ah oo ay ka go’an tahay iney dowladnimadu ay xoogeysato”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo uu Aqalka Sare ugu yeeray inuu xaliyo tabashadooda, ayaa isna habeenno ka hor shaaciyay inuu ka shaqeyn doono sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhaxeeya Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya. Hadalkaan ayuu madaxweynaha ka sheegay Xafladii xiritaanka Kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka, oo ka dhacday Madaxtooyada Soomaaliya.
Xildhibaan Hani Maxamed oo u gudbineysa dowladda dhibaatooyin haysta dadka ay matasho